प्रचण्ड र केपीबीचको वार्तामा के के कुरा भए ? - Karobar National Economic Daily
प्रचण्ड र केपीबीचको वार्तामा के के कुरा भए ?
query_builderJanuary 1, 2017 10:19 PM supervisor_accountकारोबार visibility1292
काठमाडौँट्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतवार भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौँका एक व्यापारीको घरमा भएको भनिएको गोप्य भेटवार्ता लामो समय चलेको थियो । आफ्नो सचिवालयका सबै सदस्यहरुलाई समेत थाहा नदिई भएको भनिएको यो भेटवार्तामा प्रचण्डले ओलीलाई मनाउन अधिकतम प्रयास गरेका थिए।
प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि मनाउने अधिकतम प्रयास गरेपनि ओली आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको स्रोतको भनाई छ । 'प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउँदै निर्वाचनमा जानका लागि पुरानै प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो', ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, 'तर अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्नै नहुने अडान राख्नु भयो । उहाँले संसद्मा गए नै पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने बताउनुभयो ।'
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहयोग गर्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार सदनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको भन्दै संसद् अवरोध हटाउन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा अध्यक्ष ओलीले संशोधन प्रस्ताव देश हितविपरित रहेको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाए मात्रै आफूहरुको सहयोग हुने जवाफ दिएका थिए ।
गोप्य राखिएको यो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच एक्लाएक्लै लामो समय वार्ता भएको हो । तर पनि प्रचण्ड ओलीलाई मनाउन असफल रहेको स्रोतको भनाइ छ।
वार्तामा ठोस सहमति नभए पनि केही विषयमा सहमति नजिकनजिक पुगेको बताइएको छ । सोमबार सरकार र प्रतिपक्षीबीच संसद्मा असहज स्थिति निम्त्याउन नहुनेमा दुवै नेता एकमत भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयले भेट भएको स्वीकार गरेपनि त्यसबारे विस्तृत खुलाउन चाहेन । सरकारले संविधान संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि एमालेसहित आठ दलले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
प्रचण्ड एमाले संविधान संशोधन